Talyaanigu wuxuu ballaariyay Liiska Waxqabadyada u baahan Kaarka Tallaalka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Talyaanigu wuxuu ballaariyay Liiska Waxqabadyada u baahan Kaarka Tallaalka
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kariska • dhaqanka • Education • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Xuquuqda Aadanaha • Italy War Deg Deg Ah • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Talyaanigu wuxuu ballaarinayaa Hawlaha Liiska ee u baahan Kaarka Tallaalka
Baasaboorka cagaaran wuxuu khasab ku noqon doonaa macallimiinta, ardayda jaamacadda, iyo dadka safraya iyagoo adeegsanaya gaadiidka dadweynaha ee masaafada dheer laga bilaabo 1-da Sebtembar.
Green Pass -ka Talyaaniga waa dokumenti dijital ah ama warqad ah oo muujinaya haddii qof qaatay ugu yaraan hal qiyaas tallaal COVID ah, uu tijaabiyey diidmo, ama ka bogsaday fayraska.
Aqoonsigu wuxuu qasab ku noqday inta badan goobaha ganacsiga iyo dhaqanka 6 -dii Ogosto.
Ganacsiyada dayaca in la meel mariyo xeerka waxay ku dambayn karaan ganaax labada macmiil iyo goobaha laga bilaabo € 400 ilaa € 1,000.
Saraakiisha Talyaanigu waxay ku dhawaaqeen in dowladda waddanku ay ballaarisay liiska howlaha caadiga ah ee hadda u baahan doona caddeynta tallaalka COVID-19 ama xaaladda coronavirus ee taban.
Sida maanta lagu dhawaaqay, Kaarka Cagaaran ee Talyaaniga waxay qasab ku noqon doontaa macallimiinta, ardayda jaamacadda, iyo dadka ku safraya gaadiidka dadweynaha ee masaafada dheer laga bilaabo 1-da Sebtembar.
Wasiirka Caafimaadka ee Talyaaniga Roberto Speranza ayaa sheegay in go'aanka lagu ballaarinayo xeerka lagu dabaqi karo iskuulada iyo gaadiidka dadweynaha waxaa loogu talagalay "in laga fogaado xiritaanka iyo in la ilaaliyo xorriyadda."
Green Pass waa dukumiinti dijitaal ah ama warqad ah oo muujinaya haddii qof qaatay ugu yaraan hal qiyaas tallaal COVID-19 ah, uu tijaabiyey diidmo, ama ka bogsaday caabuqa coronavirus, wuxuuna la mid yahay shahaadada caafimaadka ee dhowaan ay soo saartay Faransiiska .
Baasaboorka Cagaaran wuxuu qasab ku noqday inta badan goobaha ganacsiga iyo goobaha dhaqanka Talyaaniga, oo ay ku jiraan matxafyada, garoomada, shineemooyinka, jimicsiga iyo meelaha fadhiga gudaha ee baararka iyo maqaayadaha, 6 -da Ogosto.
Ku -guul -darreysiga in la dhaqan -geliyo xeerka cusub waxay ku dambayn kartaa ganaaxyo labada macmiil iyo goobaha laga bilaabo € 400 illaa € 1,000 ($ 470 illaa $ 1,180). Hay'adaha si isdaba joog ah u jebiya halista bixinta ayaa mas'uuliyiintu xirayaan ilaa 10 maalmood.
Raiisel wasaaraha Talyaaniga Mario Draghi wuxuu qaaday tillaabooyin gardaro ah si kor loogu qaado heerka tallaalka COVID-19 iyo xawaaraha dalkiisa. Bishii Maarso, ra'iisul wasaaruhu wuxuu amray in jabinta laga dhigo mid khasab ku ah dhammaan shaqaalaha caafimaadka. Dawladdu waxay ku soo dallacday kaadhka caafimaadka si ay kor ugu sii qaaddo heerka tallaalka.
Talyaanigu wuxuu diiwaangeliyay 27 dhimasho oo xiriir la leh coronavirus Khamiista, marka la barbardhigo 21 maalin ka hor, Wasaaradda Caafimaadka ee dalka ayaa werisay, halka tirada kiisaska cusub ay gaartay 7,230 markii ay ahayd 6,596. Talyaaniga iyo dalal kale oo badan ayaa farta ku fiiqay kala duwanaanshaha Delta ee la kala qaadi karo si loo caddeeyo tallaabooyinkeeda xakamaynta cusub ee muranka dhaliyay.